Ny tantara lavaben’ireo poeta revolisiônera tao Myanmar · Global Voices teny Malagasy
Poeta telo novonoina, ampolony naiditra am-ponja hatramin'ny fanonganampanjakana tamin'ny Febroary
Voadika ny 13 Jona 2021 15:55 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Italiano, Português, Español, Nederlands, English
Ireo poeta maty novonoin'ny fitondràn'ny tafika tao Myanmar hatramin'ilay fanonganam-panjakana tamin'ny 1 Febroary. Havia miankavanana: K Za Win, Kyi Lin Aye, Khet Thi. Sary nomen'ny The Irrawaddy, nahazoana alàlana.
Ity lahatsoratra dia navoaka voalohany tao amin'ny The Irrawaddy, tranonkalam-baovao tsy miankina ao Myanmar, ary nokiraina sy naverin'ny Global Voices navoaka etoana ho ampahany amin'ny fifanarahana mifampizara votoaty.
Miaramila an-jatony avy amin'ny fitondrà-miaramila no nisambotra an'ilay poeta Khet Thi ny harivan'ny 8 May. Ny andro taorian'io, maty izy. Voalaza fa nangataka tamin'ireo manampahefana ny vadiny mba hahazo alàlana haka ny vatana mangatsiakany tao amin'ny Hôpitaly Monywa; nesorina daholo hanaovana fitsirihana ny taova rehetra tao anatiny.
Fiampangàna azy ho mitazona zava-mipoaka no nisamborana ilay poeta 45 taona, nefa tsy nisy porofo hita tao an-tranony. Izy no fanintelony tamin'ireo poeta maty novonoin'ny miaramilan'ny ‘junta’ tao amin'ny faritra Sagaing ao Monywa, tao anatin'ny volana roa monja. Maty voatifitra nandritra ny famoretana tamin'ny volana Martsa ny poeta K Za Win, 39 taona, sy Kyi Lin Aye, 36 taona.
U Yee Mon, poeta lasa minisitry ny fiarovana tao anatin'ny governemantan'ny firaisam-pirenena (NUG) najoro hifaninana amin'ny an'ny tafika mpanongam-panjakàna, dia nanoratra toy izao tao amin'ny pejiny :
Khet Thi sy K Za Win, poeta Monywa roa no lavo. Malahelo aho. Vonona ny hiady aho mandra-pahazoantsika fandresena.
Mihoatra ny ampolony ireo poeta naneho firaisankina tamin'ny vahoaka hanohitra ny fitondràna miaramila no nogadraina koa tao Yangon, tao Pathein Ayeyawady ary Myeik Taninthayi.
Tao anatin'ny tantara lavaben'ny revôlisiôna tao Myanmar, nitolona tamin-kery tamin'ny alàlan'ny zavakantony ireo poeta nanohitra ny tsy rariny.
Taorian'ny nanonganana ilay mpanjaka farany tao Myanmar, ny Mpanjaka Thibaw, sy nandefasana azy hatao sesitany, nanoratra tononkalo ho fanandratana ny fitiavan-tanindrazana ireo poeta nalaza tao Mandalay, renivohitry ny fanjakana, isan'ireny i Saya Pe, Sebunni Sayadaw, U Kyawt ary Maunghtaung U Kyaw Hla. Tsy nionona fotsiny tamin'ny fitolomana tamin'ny alàlan'ny penina i Saya Pe fa nandeha nankany aminn'y Fanjakàna Shan mba handray sabatra. Maty tany izy. Maunghtaung U Kyaw Hla koa no poeta voalohany voasambotra nandritra ny fitondran'ny mpanjanatany noho ireo tononkalony mankahala ny mpanjanatany.
Ny poeta nalaza sy nahazo loka be indrindra nandritra ny vanimpotoanan'ny fanjanahantany dia i Thakhin Kodaw Hmaing, fantatra koa tamin'ny anarana hoe Maung Lun, izay nilaza fa hiady amin'ny alàlan'ireo tononkalony ho an'ny fahaleovantenan'ny firenena. Voaporofo fa natanjaka ny peniny tamin'ny fametrahana ny fitiavan-tanindrazana tany am-pon'ny vahoaka tao Myanmar.
Tamin'ny 1941, ny lazany amin'ny maha-nasionalista mpanohitra ny fanjanahantany azy sady lehiben'ny Doh Bamar Asiayon (ny We Burmans Association) dia nahazoany toerana iray tao anaty lisitr'ireo manampahefana britanika, “ny lisitra Burma,” nahatonga azy ho “fahavalom-panjakana.” Nitàna andraikitra goavana tamin'ny ady fitakiana fahaleovantenan'i Myanmar ilay vondrona, nampitambatra ireo rantsana nasiônalista sy ireo ideôlôjia vaovaon'ny pôlitika no sady nampitombo ny fahatsiarovantena ara-politika.
Nandritra ny vanimpotoana nitondran'ny governemantan'ny Ligim-panafahan'ny vahoaka manohitra ny fasista taorian'ny fahaleovantena, fantatra tamin'ny asan-dry zareo nanohanany ny hetsik'ireo mpianatra, mpiasa ary tantsaha ireto poeta ireto: Daung Nwe Swe, Ne Thway Ni, Maung Yin Mon, sy ny maro hafa, hatramin'ireo tononkalo manohitra ny ady sy ireo teny mananihany an'ireo mpitàna birao.
Kanefa, nisy sivana henjana napetraka taorian'ny nakàn'ny Jeneraly Ne Win ny fitondrana tamin'ny 1962. Noroahana hiala ny toerana maha-toniandahatsoratra azy tao amin'ilay Myawady, gazetibokin'ny tafika, ilay poeta Min Yu Wai taorian'ny nanoratany tononkalo iray nambara ho nanakiana ny mpanao jadona.
Nohelohina higadra roa taona ny poeta Win Latt sy ny mpamoaka lahatsoratra, Win Khet, tao amin'ny gazety Perspective noho ny namoahany tononkalo iray mananihany momba an'i Ne Win sy ny vadiny, Khin May Than.
Marobe ireo poeta nalefa tany am-ponja fony fitondran'ny antoko Burma Socialist Program Party (BSPP) noho izy ireo nandray anjara tamin'ireo hetsika rehetra nanoherana ny fitondrana mpamoritra.
Tany amin'ny andian-taona 1970s tany, nanomboka nitokona tsy nihinan-kanina niaraka tamin'ireo mpifonja hafa ilay poeta Lay Maung avy ao Mandalay, izay teo ampamitàna ny fotoana naha-gadra pôlitika azy tao amin'ireo Nosy Coco. Nangatahan-dry zareo ny fanafoanana ilay nosy-fonja, izy nosalorana ny anarana “Nosin'ny Devoly” Birmàna.” Maty tany am-ponja izy rehefa nahavita nitokona tsy nihinan-kanina nandritra ny 50 andro mahery. Noho ny sorona nataon'ilay poeta sy ireo fito hafa, nafindran'ny BSPP ho any amin'ny fonja Insein ao Yangon daholo ireo gadra, nanamarika hetsika iray goavana tao anatin'ny tantaran'ny rafitra famonjàna ao Myanmar.
Nandritra ny fitroarana tamin'ny 1988 nombàna ny demakrasia, niray hina tamin'ny vahoaka ireo poeta, hetsika izay nandrava ny jadon'antoko tokan'i Ne Win. Poeta ihany koa i U Min Ko Naing, iray amin'ireo sangany mpitarika ireo mpianatra tamin'ny 1988.
Ilay mpitarika ny mpianatra, Shwe Phone Lu, izay taty aoriana lasa poeta-mpanoratra nahalafo boky betsaka indrindra teo ambanin'ny solonanarana Taryar Min Wai, dia nanoratra tononkalo iray niantsoany ireo mpianatra hanao ankivy ny fampianarana, raha ny fitondrà-miaramila kosa nanokatra ireo oniversite sy sekoly maro taorian'ilay fitroarana. Naiditra am-ponja nandritra ny dimy taona izy noho izay tononkalo izay.
Tamin'ny 1989, nosamborina noho ilay tononkalony mananihany “Fa nisy inona?” ilay mpanoratra malaza Min Lu, tononkalo nanakiana ilay Jeneraly mpitarika ny fanonganam-panjakana, Saw Maung sy ny tafika Birmàna. Lasa fisehoan-javatra nahagaga ilay tononkalo, ary izy sy ny mpamoaka lahatsoratra dia samy nohelohina dimy taona am-ponja avokoa.
Ny poeta Min Thu Wun, rain'i U Htin Kyaw, filohampirenena fahasivy, tao Myanmar no sady vaolohany lehiben'ny governemantan'ny National League for Democracy (NLD), ihany koa dia nahita ny tononkalony noraràn'ny fitondràna miaramila taorian'ny nandresen'ny NLD tamin'ny fifidianana solombavambahoaka tamin'ny 1990, satria nandray anjara mavitrika tamin'ireo fampielezankevitry ny antoko izy.
Ny poeta Tin Moe, endrika iray tsy zoviana ao amin'ny NLD, koa dia naiditra am-ponja nandritra ny dimy taona noho ny nanoratany tononkalo sy nanaovany kaonferansa nanerana ny firenena mba hisian'ny demaokrasia. Voatery niaina an-tsesitany izy taorian'ny nanafahana azy ary maty tany ivelany tamin'ny 2007.
Tamin'ny 2008, nosamborina ilay poeta Saw Wai noho ny tononkalony momba ny Andron'ny Mpifankatia nasiany hafatra miafina, naniratsira ny jeneraly mpanao jadona tamin'izany fotoana izany, Than Shwe. Rehefa natambatra ny litera voalohan'ny andalana tsirairay tamin'ilay tononklao dia nivaky hoe , “power-crazed Snr-Gen Than Shwe. (Jeneraly Than Shwe adalam-pahefana)”
Nandritra ireo taona 136 lasa hatramin'ny nanonganana ny Mpanjaka Thibaw tamin'ny 1885, ka hatramin'ilay nakàn'ny lehiben'ny tafika, ny Jeneraly Min Aung Hlaing, ny fahefana tamin'ny 1 Febroary tamin'ity taona ity, mampiseho hatrany firaisankina tamin'ireo olontsotra ireo poeta ary teny ambava ady isaky ny misy revôlisiôna tao Myanmar. Vavolombelona amin'izany ny tononkalon'i Khet Thi:
Eny amin'ny loha, tifirin-dry zareo
Tsy fantatr'izy ireo velively
Ao am-po no misy ny revôlisiôna.
1 andro izayEtiopia
3 herinandro izayMyanmar (Birmania)